ယူရို-၂၀၂၀ ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့ပှဲအဖွဈ ဥရောပထိပျသီးအသငျးတှဖွေဈတဲ့ အင်ျဂလနျနဲ့ ဂြာမနီအသငျးတို့ဟာ ဒီနညေ့ မွနျမာစံတျောခြိနျ (၁၀:၃၀)အခြိနျကရြငျ ဝငျဘလကှေငျးမှာ ယှဉျပွိုငျကစားရမှာဖွဈပါတယျ။
နှဈသငျးစလုံး အစဉျအလာပွိုငျဘကျတှဖွေဈသလို နိုငျငံသမိုငျးကွောငျးအစဉျအလာ၊ ဘောလုံးသမိုငျးတဈလြှောကျ ပွိုငျဆိုငျမှုပွငျးထနျခဲ့တာကွောငျ့ ဒီနှဈသငျးဆုံတှရေ့ငျ အမွဲတမျးပှဲဆူလရှေိ့ပါတယျ။
အင်ျဂလနျနဲ့ ဂြာမနီအသငျးတို့ဟာ ကမ်ဘာ့ဖလား/ယူရိုပွိုငျပှဲနှဈခုမှာ အခုပှဲအပါအဝငျ စုစုပေါငျး(၈)ကွိမျအထိဆုံတှဖေူ့းပွီး ဒါက ဘောလုံးသမိုငျးတဈလြှောကျ ပွိုငျပှဲကွီးတှမှော နှဈသငျးထိပျတိုကျတှဆေုံ့မှုအမြားဆုံးပါပဲ။
အင်ျဂလနျအသငျးအနနေဲ့ ဝငျဘလကှေငျးမှာကစားရတာကွောငျ့ အိမျကှငျးအားသာခကျြရှိနပေမေယျ့ နှဈပေါငျးမြားစှာ မခြိုးဖကျြနိုငျသေးတဲ့ မှတျတမျးဆိုးတဈခုလညျးရှိနပေါတယျ။
အဲဒါကတော့ ၁၉၆၆ ကမ်ဘာ့ဖလားပွိုငျပှဲနောကျပိုငျး နှဈပေါငျး(၅၀)ကြျောအတှငျး နိုငျငံတကာပွိုငျပှဲကွီးတှရေဲ့ ရှုံးထှကျအဆငျ့မှာ ဂြာမနီအသငျးနဲ့ ဆုံတှခေဲ့တိုငျး အင်ျဂလနျအသငျး အနိုငျမရဖူးသေးတာပါပဲ။
အိမျရှငျအဖွဈ လကျခံကငျြးပခဲ့တဲ့ ၁၉၆၆ ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲတုနျးက အင်ျဂလနျအသငျးဟာ ဂြာမနီအသငျးကို အခြိနျပိုမှာသှငျးယူခဲ့တဲ့ဂိုးတှနေဲ့အတူ (၄-၂)ဂိုးရလဒျနဲ့ အနိုငျရဗိုလျစှဲခဲ့ပွီး
အဲဒီနောကျပိုငျး အံ့အားသငျ့စရာကောငျးလောကျအောငျ ရှုံးထှကျအဆငျ့တှမှော ဂြာမနီကို အနိုငျမရတော့တာက (၅၅)နှဈအထိကွာမွငျ့နပေါပွီ။
၁၉၇၀ ကမ်ဘာ့ဖလားကှာတားဖိုငျနယျမှာ ဂြာမနီအသငျးက (၃-၂)ဂိုးနဲ့ အင်ျဂလနျကိုအနိုငျယူပွီး ကမ်ဘာ့ဖလားဗိုလျလုပှဲရှုံးကွှေးပွနျဆပျခဲ့သလို ၁၉၉၀ ကမ်ဘာ့ဖလားဆီမီးဖိုငျနယျမှာလညျး ဂြာမနီအသငျးကပဲ ပယျနယျတီအဆုံးအဖွတျနဲ့ အနိုငျရခဲ့ပွနျပါတယျ။
အင်ျဂလနျနိုငျငံမှာ ကငျြးပခဲ့တဲ့ ယူရို-၉၆ ပွိုငျပှဲတုနျးက ဆီမီးဖိုငျနယျအဆငျ့မှာ ဂြာမနီအသငျးဟာ ပယျနယျတီအဆုံးအဖွတျနဲ့ အိမျရှငျအင်ျဂလနျကို
ထပျမံအနိုငျရခဲ့ပွီး နိုငျငံတကာပွိုငျပှဲကွီးတဈခုမှာ နောကျဆုံးအကွိမျဆုံတှခေဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ကမ်ဘာ့ဖလားရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့မှာတော့ ဂြာမနီက (၄-၁)ဂိုးရလဒျနဲ့ အင်ျဂလနျကို အရှကျတကှဲဖွဈစခေဲ့ပါတယျ။
(၇)နှဈအကွာမှာတော့ ယူရို-၂၀၂၀ ပွိုငျပှဲရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့မှာ ဒီနှဈသငျး ပထမဆုံးအကွိမျ ပွနျဆုံတှနေ့ပေါပွီ။
အင်ျဂလနျအသငျးအတှကျ နောကျထပျစိုးရိမျစရာကောငျးတဲ့ မှတျတမျးဆိုးတဈခုကလညျး ယူရိုပွိုငျပှဲသမိုငျးတဈလြှောကျ (၅၃)နှဈတာကာလအတှငျး အင်ျဂလနျအသငျးဟာ ရှုံးထှကျအဆငျ့ပှဲတှမှော တဈကွိမျသာအနိုငျရခဲ့တာပါပဲ။
အင်ျဂလနျအသငျးဟာ ယူရို-၁၉၆၈ ဆီမီးဖိုငျနယျမှာ ယူဂိုဆလားဗီးယားကို ရှုံး၊ ယူရို-၁၉၉၆ ကှာတားဖိုငျနယျမှာ စပိနျကို ပယျနယျတီနဲ့အနိုငျယူခဲ့ပမေယျ့
ဆီမီးဖိုငျနယျမှာတော့ ဂြာမနီကို ပယျနယျတီနဲ့ပဲ ရှုံးနိမျ့ပွီး ၂၀၀၄ ကှာတားဖိုငျနယျမှာ ပျေါတူဂီ၊ ၂၀၁၂ ကှာတားဖိုငျနယျမှာ အီတလီနဲ့ ၂၀၁၂ ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့မှာ အိုကျစလနျတို့ကို ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာပါ။
ဒီလိုမှတျတမျးဆိုးတှပေိုငျဆိုငျထားတဲ့ အင်ျဂလနျအသငျးအနနေဲ့ အခုဂြာမနီနဲ့ကစားမယျ့ပှဲမှာ နိုငျပှဲရယူပွီး နှဈပေါငျးမြားစှာကွာမွငျ့နပွေီဖွဈတဲ့ အစဉျအလာဆိုးတှေ၊ ရာဇဝငျပွိုငျဘကျ ဂြာမနီနဲ့ ရှုံးထှကျအဆငျ့တှမှော ဆုံတှတေို့ငျး ရလဒျမကောငျးခဲ့တာတှကေို ရပျတနျ့နိုငျမလား . . .
ဒါမှမဟုတျ ကွမ်မာဆိုးတှပေဲ ဆကျလကျပိုငျဆိုငျသှားမလားဆိုတာကတော့ . . .
၁၉၆၆ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကတည်းက နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကြီးတွေရဲ့ ရှုံးထွက်အဆင့်မှာ ဂျာမနီကို တစ်ခါမှ မနိုင်ဘူးသေးတဲ့ အင်္ဂလန်
ယူရို-၂၀၂၀ ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်ပွဲအဖြစ် ဥရောပထိပ်သီးအသင်းတွေဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလန်နဲ့ ဂျာမနီအသင်းတို့ဟာ ဒီနေ့ည မြန်မာစံတော်ချိန် (၁၀:၃၀)အချိန်ကျရင် ဝင်ဘလေကွင်းမှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်သင်းစလုံး အစဉ်အလာပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်သလို နိုင်ငံသမိုင်းကြောင်းအစဉ်အလာ၊ ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက် ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ခဲ့တာကြောင့် ဒီနှစ်သင်းဆုံတွေ့ရင် အမြဲတမ်းပွဲဆူလေ့ရှိပါတယ်။
အင်္ဂလန်နဲ့ ဂျာမနီအသင်းတို့ဟာ ကမ္ဘာ့ဖလား/ယူရိုပြိုင်ပွဲနှစ်ခုမှာ အခုပွဲအပါအဝင် စုစုပေါင်း(၈)ကြိမ်အထိဆုံတွေ့ဖူးပြီး ဒါက ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက် ပြိုင်ပွဲကြီးတွေမှာ နှစ်သင်းထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုအများဆုံးပါပဲ။ အင်္ဂလန်အသင်းအနေနဲ့ ဝင်ဘလေကွင်းမှာကစားရတာကြောင့် အိမ်ကွင်းအားသာချက်ရှိနေပေမယ့် နှစ်ပေါင်းများစွာ မချိုးဖျက်နိုင်သေးတဲ့ မှတ်တမ်းဆိုးတစ်ခုလည်းရှိနေပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ၁၉၆၆ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲနောက်ပိုင်း နှစ်ပေါင်း(၅၀)ကျော်အတွင်း နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကြီးတွေရဲ့ ရှုံးထွက်အဆင့်မှာ ဂျာမနီအသင်းနဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့တိုင်း အင်္ဂလန်အသင်း အနိုင်မရဖူးသေးတာပါပဲ။
အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပခဲ့တဲ့ ၁၉၆၆ ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲတုန်းက အင်္ဂလန်အသင်းဟာ ဂျာမနီအသင်းကို အချိန်ပိုမှာသွင်းယူခဲ့တဲ့ဂိုးတွေနဲ့အတူ (၄-၂)ဂိုးရလဒ်နဲ့ အနိုင်ရဗိုလ်စွဲခဲ့ပြီး အဲဒီနောက်ပိုင်း အံ့အားသင့်စရာကောင်းလောက်အောင် ရှုံးထွက်အဆင့်တွေမှာ ဂျာမနီကို အနိုင်မရတော့တာက (၅၅)နှစ်အထိကြာမြင့်နေပါပြီ။ ၁၉၇၀ ကမ္ဘာ့ဖလားကွာတားဖိုင်နယ်မှာ ဂျာမနီအသင်းက (၃-၂)ဂိုးနဲ့ အင်္ဂလန်ကိုအနိုင်ယူပြီး ကမ္ဘာ့ဖလားဗိုလ်လုပွဲရှုံးကြွေးပြန်ဆပ်ခဲ့သလို ၁၉၉၀ ကမ္ဘာ့ဖလားဆီမီးဖိုင်နယ်မှာလည်း ဂျာမနီအသင်းကပဲ ပယ်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်နဲ့ အနိုင်ရခဲ့ပြန်ပါတယ်။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ယူရို-၉၆ ပြိုင်ပွဲတုန်းက ဆီမီးဖိုင်နယ်အဆင့်မှာ ဂျာမနီအသင်းဟာ ပယ်နယ်တီအဆုံးအဖြတ်နဲ့ အိမ်ရှင်အင်္ဂလန်ကို ထပ်မံအနိုင်ရခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုမှာ နောက်ဆုံးအကြိမ်ဆုံတွေ့ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၄ ကမ္ဘာ့ဖလားရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်မှာတော့ ဂျာမနီက (၄-၁)ဂိုးရလဒ်နဲ့ အင်္ဂလန်ကို အရှက်တကွဲဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ (၇)နှစ်အကြာမှာတော့ ယူရို-၂၀၂၀ ပြိုင်ပွဲရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်မှာ ဒီနှစ်သင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ပြန်ဆုံတွေ့နေပါပြီ။
အင်္ဂလန်အသင်းအတွက် နောက်ထပ်စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့ မှတ်တမ်းဆိုးတစ်ခုကလည်း ယူရိုပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက် (၅၃)နှစ်တာကာလအတွင်း အင်္ဂလန်အသင်းဟာ ရှုံးထွက်အဆင့်ပွဲတွေမှာ တစ်ကြိမ်သာအနိုင်ရခဲ့တာပါပဲ။ အင်္ဂလန်အသင်းဟာ ယူရို-၁၉၆၈ ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာ ယူဂိုဆလားဗီးယားကို ရှုံး၊ ယူရို-၁၉၉၆ ကွာတားဖိုင်နယ်မှာ စပိန်ကို ပယ်နယ်တီနဲ့အနိုင်ယူခဲ့ပေမယ့် ဆီမီးဖိုင်နယ်မှာတော့ ဂျာမနီကို ပယ်နယ်တီနဲ့ပဲ ရှုံးနိမ့်ပြီး ၂၀၀၄ ကွာတားဖိုင်နယ်မှာ ပေါ်တူဂီ၊ ၂၀၁၂ ကွာတားဖိုင်နယ်မှာ အီတလီနဲ့ ၂၀၁၂ ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်မှာ အိုက်စလန်တို့ကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာပါ။
ဒီလိုမှတ်တမ်းဆိုးတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အင်္ဂလန်အသင်းအနေနဲ့ အခုဂျာမနီနဲ့ကစားမယ့်ပွဲမှာ နိုင်ပွဲရယူပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ အစဉ်အလာဆိုးတွေ၊ ရာဇဝင်ပြိုင်ဘက် ဂျာမနီနဲ့ ရှုံးထွက်အဆင့်တွေမှာ ဆုံတွေ့တိုင်း ရလဒ်မကောင်းခဲ့တာတွေကို ရပ်တန့်နိုင်မလား . .ဒါမှမဟုတ် ကြမ္မာဆိုးတွေပဲ ဆက်လက်ပိုင်ဆိုင်သွားမလားဆိုတာကတော့ . . .